RASMI: Halyeeyga Chelsea Petr Cech oo kusoo laabtay Stamford Bridge & Marina Granovskia oo soo dhaweysay. – Gool FM
Abdirashid Mohamud June 21, 2019
(London) 21 June 2019. Halyeeyga Chelsea Petr Cech ayaa xaqiijiyay inuu dib ugu soo laabtay Stamford Bridge kadib markii uu twitter-ka soo dhigay sawir uu kula jiro Marina Granovskia, muddo kadib ayuuna noqon doonaa mid la shaqeeya maamulka kooxdiisii hore.
37-jirkaan ayaa isaga soo tagay Arsenal maadaama uu dhamaaday heshiiskii uu kula jiray, wuxuuna door agaasime ka qaban doonaa kooxda uu mudada badan ku sugnaa ee Blues, wuxuuna twitter-ka ku muujiyay sida uu yahay dareenkiisa marba hadii uu kusoo laabtay galbeedka London.
“Waxaan u mudnaan weyn inaan helo fursad aan ugu biiro Chelsea mar kale, isla markaana ka caawiyo iney noqoto meel bandhigga ugu fiican ee suragalka ah lagu soo bandhigo si loo wado guulaha kooxda ay sameysay 15 kii sano ee lasoo dhaafay” ayuu Petr kusoo qoray bartiisa twitter-ka.
“Waxaan isha ku hayaa tartan cusub, waxaana rajeynayaa inaan aqoonteyda iyo khibradeyda kubadda ku caawiyio kooxda si ay u gaarto guulo badan mustaqbalka”
Petr Cech ayaa noqonaya agaasimaha farsamada ee kooxda Blues, waxaana dhinac taagan Marina Granovskaia oo dib ugu soo dhaweysay Stamford Bridge.
Goolhayahaan u dhashay Czech Republic ayaa ku qarash gareeyay Blues in ka badan toban sanadood, wuxuuna kooxda kasoo muuqday 494 kulan dhamaan tartamada oo dhan, kula guuleystay afar jeer horyaalka Premier League, sidoo kalana labada tartan ee ugu waaweyn yurub ayuu kula guuleystay.
Mohamed Salah, Sadio Mane & Riyad Mahrez oo hogaaminaya liiska 10-ka xiddig ee isha lagu haayo koobka AFCON 2019 - Yaa Kula jira liiska?
Ma ahan Real Madrid mana ahan Paris-St Germain... Kylian Mbappé oo doortay kooxda Barcelona